ရွှေနိုင်ငံ: February 2012
''အခုလာမယ့် မတ်လ ၅ ရက်နေ့မှာ နေပြည်တော်နဲ့ ရန်ကုန်မြို့တွေမှာ ဂျီအက်စ်အမ်ဖုန်းတွေ စပြီး ချပေးသွားမယ်။ တန်ဘိုးကတော့ ငွေကျပ်တစ်သိန်းရှစ်သောင်း သတ်မှတ်ထားပါတယ်။ ချပေးမယ့် အလုံးအရေအတွက်ကိုတော့ အတိအကျ မသိရသေးပါဘူး'' ဟု နေပြည်တော် မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းမှ တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးထံမှ စုံစမ်းသိရှိရပါသည်။
လာမည့် မတ်လ ၅ ရက်နေ့တွင် စတင်ချပေးမည့် ဂျီအက်စ်အမ်ဖုန်းများ၏ နံပါတ်ကို ၀၉-၄၂ နံ ပါတ်ဖြင့် ချပေးမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ ငွေကျပ် ၁၅ သိန်းတန် စီဒီအမ်အေဖုန်းများကို ၂၀၀၉ ခုနှစ်အတွင်း စတင်ချထားပေးခဲ့ပြီး ငွေကျပ် ငါးသိန်းတန် စီဒီအမ်အေဖုန်းများနှင့် ၂၀၁၀ ခုနှစ်တွင်ချထားပေးခဲ့ပြီး ငွေကျပ် ငါးသိန်းတန် ဂျီအက်စ်အမ်ဖုန်းများကိုလည်း ချထားပေးခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ ယခုအခါ ၂၀၁၂ ခုနှစ်မတ်လ ၅ရက်နေ့တွင် ငွေကျပ်တစ်သိန်းရှစ်သောင်းတန် ဂျီအက်စ်အမ်ဖုန်းများကို နေပြည်တော်နှင့် ရန်ကုန်မြို့တို့တွင် စတင် ချထားပေးမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
Eeven Media Group
ပြည်ပရောက်မြန်မာနိုင်ငံသားတစ်ယောက်ရဲ့ ရင်တွင်းစကား (အမေး-အဖြေ)
-ခင်ဗျားအနေနဲ့ အခုကြားဖြတ်ရွေးကောက် ပွဲမှာဘယ်သူ့ကိုနိုင်စေချင်လဲ?
-အမေစုရဲ့နိုင်ငံရေး ဒသနတွေကို ယုံကြည်လို့လား?
-အမေစုရဲ့ လုပ်ရည် ကိုင်ရည်ကိုကြိုက်လို့လား?
ဘာမှ မှ မလုပ်၇သေးတာကို.
-အမေစုက တိုင်းပြည်လွတ်လပ်ရေးဖခင်ကြီး ၇ဲ့သမီးဖြစ်နေလို့လား?
အဖေက ဆ၇ာဝန်ဆိုတာနဲ့ သားကဆရာဝန်ဖြစ်မှာသေချာလို့လား.
-ဒါဆို အမေစု ၇ဲ့တိုင်းပြည်အပေါ်အနစ်နာခံပြီးလုပ်နေတဲ့ စိတ်ကိုကြိုက်လို့လား?
-အမေစု အာဏာ ရရင် ဒါမှမဟုတ် လွတ်တော်ထဲရောက်ခဲ့ရင်အမျိုးသားစည်းလုံးညီညွတ်ရေးလုပ်မယ်ဆိုတာကို ယုံကြည်လို့လား?
သူ့ရဲ့ ပါတီထဲမှာတောင် သဘောထားတွေဒီလောက်ကွဲနေတာကိုဗျာ.
-ဒါဆို ဘာလို့ အမေစုကိုနိုင်စေချင်တာလဲ?
အော် ဒါလား.. ကျွန်တော်ထင်တယ်ဗျာ.. သူ့ပါတီသာ.မနိုင်ရင် အခုကျင်းပမယ့်
ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲ က မမျှတဘူးလို့ နိုင်ငံတကာကိုပြောမှာသေချာတယ်.
အဲ့အခါကျ၇င် နိုင်ငံတကာက ကျွန်တော်တို့အပေါ် ကူညီတာတွေ.. ရပ်သွားမှာရယ်..
ဒီရွေးကောက်ပွဲမမျှတဘူးဆိုပီး.. စီးပွားရေးပိတ်ဆို့ထားတာတွေ ဆက်ထားမယ်ဆိုရင်
အခုသမ္မတကြီး ဦးသိန်းစိန် ကြိုးစားနေတဲ့ အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံတွေနဲ့ စီးပွားရေးရင်ဘောင်တန်း
နိုင်အောင် လုပ်မယ်ဆိုတဲ့ မျှော်လင့်ချက်ကြီး နှောင့်နှေးသွားမှာကြောက်လို့ပါ..
ခင်ဗျားတို့လည်းကြားမှာပေါ့. မန္တလေးမှာ ဟောပြောမယ့်အစီအစဉ်ပျက်သွားတုန်းက
သူတို့ငှားတဲ့ ဗထူး အားကစားကွင်းမရတာကို တောင် ဦးဇော်ဇော်နဲ့ အစိုးရ ပေါင်းပြီး
-ဟုတ်ကဲ့ ခင်ဗျားအနေနဲ့ အမေစု ဟောပြောတဲ့မိန့်ခွန်းတွေအပေါ်ဘယ်လိုမြင်လဲခင်ဗျ?
ဟုတ်ကဲ့ အမှန်တိုင်းပြောမယ်နော်... ဟဲဟဲ... နားထောင်လို့တော့ကောင်းတယ်ဗျ..
ကျွန်တော်သိတာက ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းကျဆုံးသွားတုန်းက သူ့အသက် ၂ နှစ်သမီး
ဘဲ၇ှိသေးတယ် လို့ထင်တယ်..ဒါပေမယ့် သူဟောပြောတဲ့အခါတွေမှာ
"ဖေဖေ ပြောသွားဖူးတယ်.. ဖေဖေပြောဖူးတယ်......ဖေဖေ၇ှိတုန်းက ..."
အဲ့ဒါတွေက ကျွန်တော်နားထောင်ဖူးတဲ့ ဟောပြောပွဲတိုင်းနီးပါးပါတယ်လို့ထင်တယ်...
ကျွန်တော်တို့လူငယ် စကားနဲ့ပြောရင်တော့ ဖေဖေ နဲ့လုပ်စားနေတယ်လို့တော့ထင်တယ်ဗျာ..
-ဒါဆိုခင်ဗျားက အမေစုကို အရည်ချင်းမရှိဘူးလို့ပြောချင်တာလား?
အရည်ချင်းရှိလို့ဘဲ .. တတိယကမ္ဘာစစ်မဖြစ်အောင် လုပ်ပေးခဲ့တဲ့ .. ကမ္ဘာက လွတ်လပ်ရေးဗိသုကာ
ကြီးလို့ပြောတဲ့ ကျွန်တော်တို့မြန်မာလူမျိုး ဦးသန့်တောင်မရခဲ့တဲ့.. ငြိမ်းချမ်းရေးနိုဘယ်လ် ဆုကို သူ ၇ထားတာမ ဟုတ်ဘူးလား..
Posted by ရွှေနိုင်ငံ at 02:372comments:
ရွှေပြည်တံခွန်က စလိုက်တဲ့ ငါးထောင်တန် Sim Card ပြဿနာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အယူအဆ အမျိုးမျိုး ရေးသား နေကြပါတယ်။ အဲဒီအထဲက ၂၀၁၂ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလ (၈) ရက်နေ့ထုတ် Mobile Guide ဂျာနယ်မှာ မိုဘိုင်းဖုန်း နည်းပညာ၊ ဈေးကွက် ကျွမ်းကျင်သူ တစ်ဦးလည်းဖြစ်၊ England နိုင်ငံကနေ MBA (Telecom) ဘာသာရပ်ကို အထူးပြု သင်ကြားခဲ့သူ တစ်ဦးလည်း ဖြစ်တဲ့ ဦးပြည်စိုးထွန်းနဲ့ အင်တာဗျူးက စီးပွားရေး ရှုထောင့်၊ နည်းပညာ ရှုထောင့် နှစ်ခုလုံးကနေ သုံးသပ်ထားပြီး ဖတ်ရသမျှထဲမှာ အကောင်းဆုံး ဖြစ်လို့ တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။
အခု လက်ရှိ ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ ငါးထောင်တန်ဖုန်း ဖြစ်နိုင်၊ မဖြစ်နိုင် ဆိုတဲ့ နေရာမှာ အစ်ကို့ရဲ့ အမြင်ကို သုံးသပ်ပေးပါဦး
နှစ်ဖက်စလုံးက ပြောနေတာတွေတော့ ရှိပါတယ်။ ဒီအခြေအနေကို ပြောရမယ် ဆိုရင်တော့ နိုင်ငံ တစ်ခုလုံး ခြုံကြည့်ဖို့ လိုတယ်။ Improve ဖြစ်ဖို့က အဓိက ဖြစ်ဖို့ လိုတယ်။ ခြုံကြည့်တဲ့ အချိန်မှာလည်း Business Area ဖြစ်တဲ့ ရန်ကုန်လိုမျိုး၊ ဧရာဝတီလိုမျိုးကို ကွက်ြပီး ကြည့်လို့ မရဘူး။ နိုင်ငံ တစ်ခုလုံး ခြုံကြည့်ရမယ်။ ကိုယ့်ရဲ့ တိုင်းရင်းသားတွေ ရှိတဲ့ ချင်းတောင် လိုဟာမျိုး၊ ကချင်ပြည်နယ်လို နေရာမျိုးတွေကိုလည်း ကြည့်ရမယ်။ အဲဒီနေရာ မျိုးတွေမှာ Tele density မြင့်ဖို့ ဆိုတာလည်း အစိုးရမှာ တာဝန် ရှိတယ်။ ဒါတွေကို ချန်ထား ပြီးတော့ ရန်ကုန်လို နေရာမျိုးကိုပဲ develop ဖြစ်အောင် လုပ်မယ် ဆိုရင် အခုလို အချိန်မျိုးမှာ ပိုပြီးတောင် အပြောခံရနိုင်တယ်။ ဒီနေရာက develop ဖြစ်တယ်။ ဒီနေရာက မဖြစ်ဘူး ဆိုပြီး ပိုပြီးတောင် အပြောခံရဦးမယ်။ အစိုးရ အနေနဲ့ ဒါတွေကို Setup လုပ်ဖို့ ဆိုတာ နယ်စွန်နယ်ဖျားမှာလည်း setup လုပ်ဖို့ လိုတယ်။ အဲဒီလို လိုတဲ့နေရာမှာလည်း ဖုန်းတစ်လုံးနဲ့ တစ်လုံး ပြောဖို့ဆိုတာ Transmittion Link မရှိဘဲနဲ့ ပြောလို့မရဘူး။ Transmittion Link ရှိဖို့ဆိုတာက backbone တွေ ဘာတွေချဖို့ အများကြီး လိုအပ်တယ်။ အဲဒီ အပေါ် မှာလည်း Cost တွေ အကုန်လုံးက စီးပွားရေးအရ တွက်ချေ ကိုက်တာ မကိုက်တာက နောက်မှထား။ အရေးကြီးတာက Tele density အရ နယ်စွန် နယ်ဖျားတွေမှာ ရှိရမယ်။ ပြီးတော့လည်း improve ဖြစ်ဖို့ဆိုတာက ဒီ cost တွေကို ထည့်တွက် ထားဖို့ မေ့ထား ရမယ်။ နိုင်ငံတော် အနေနဲ့ဆိုရင် ဒါတွေ အရေး မကြီးသေးဘူး။ အဲဒီလိုမျိုး စဉ်းစားပြီးမှ လုပ်တဲ့ အတွက်ကြောင့်လည်း သူ့အနေနဲ့ အခုအချိန်မှာ Cost တွေ ဘာတွေ ကြီးတာ ဖြစ်နိုင်တယ်။
တရုတ်နိုင်ငံကို သွားရောက်တဲ့ ခရီးစဉ်ဟာ နှစ်နိုင်ငံအကြား ရှိရင်းစွဲ ချစ်ကြည် ရင်းနှီးမှုကို တိုးမြင့်ဖို့သွားရောက်မှာ ဖြစ်တယ်လို့ ပြည်သူ့လွှတ်တော် ဥက္ကဌ သူရဦးရွှေမန်းက ပြောလိုက်ပါတယ်။ သူရ ဦးရွှေမန်းဟာ မနေ့က နေပြည်တော်ကနေ တရုတ်နိုင်ငံကို ၅ ရက်ကြာ ချစ်ကြည်ရေး ခရီးစဉ်အဖြစ် သွားရောက်တာဖြစ်ပါတယ်။ ကိုဇော်ဝင်းလှိုင်က အပြည့်အစုံကို တင်ပြပေးထားပါတယ်။
“နိုင်ငံတော် သမ္မတထံ တင်ပြသည့် စာများထဲမှ မှန်ကန်သော ကိစ္စများကို ထိထိရောက်ရောက် ဆောင်ရွက်ခဲ”့
နိုင်ငံတော် သမ္မတထံသို့ တင်ပြသည့်စာ ၆၆ဝဝ မှ မှန်ကန်သော အမှုများမှ ဝန်ထမ်းများကိုထောင်ချ ထုတ်ပစ် သည် အထိ အရေးယူ ခဲ့ကြောင်း သမ္မတရုံး ဝန်ကြီး ဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးစိုးမောင်က ပထမအကြိမ် အမျိုးသားလွှတ်တော် တတိယ ပုံမှန်အစည်းအဝေး ပဉ္စမနေ့တွင် ပြောကြား လိုက်သည်။ ''တင်ပြစာပေါင်း ၆၆ဝဝ အနက်မှ စိစစ် ပြီး အမှုပေါင်း ၂၇၈ဝ ရှိပြီး ဆက်လက် စိစစ် ဆဲက ၁၉၅၁ စောင် ဖြစ်ပါတယ်။ အဆင့် မမီနဲ့ အကြိမ်ကြိမ် တိုင်ကြားမှုက ၁၉၂၉ စောင်ဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါ အမှုများ ကို စိစစ်ရာ မှန်ကန်ကြောင်း တွေ့ရှိသူများကို ကျူးလွန်သော ပြစ်မှု အလိုက် ထောင်ချပစ်ခြင်း၊ ထုတ်ပစ်ခြင်း၊ အငြိမ်းစား ပေးခြင်း၊ အဆင့်လျှော့ချခြင်း၊ အဆင့် တိုးမြှင့် မှုရပ်ဆိုင်းခြင်း၊ နေရာပြောင်းရွှေ့ ခြင်း၊ မှတ်တမ်းဝင် သတိပေးခြင်းနဲ့ နှုတ်ဖြင့် သတိပေးခြင်းတို့ကို ဆောင်ရွက်ပြီး အရေးယူ ထိန်းသိမ်း ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါတယ်'' ဟု ဝန်ကြီးက ချင်းပြည်နယ် မဲဆန္ဒနယ် အမှတ်(၄) မှ ဦးစတီဗင် သာဘိတ်၏ ''ဝန်ထမ်း များအား လစာ တိုးပေးရန် အကြံပြုကြောင်းနှင့် ဌာနဆိုင်ရာတွင် တပ်မတော်မှပြောင်းရွှေ့ လာသူများအား ခန့်ထားသည့် ပေါ်လစီကို ပြန်လည် သုံးသပ်ရန် အစီအစဉ်ရှိ မရှိ'' ဟူသော မေးခွန်းကို ပြန်လည် ဖြေကြား ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ အဆိုပါအမှုများတွင် တရားရေး ကဏ္ဍ၌ တရားသူကြီးကို တိုင် ကြားမှု ၄၉ စောင်၊ တရားစီရင်မှု ကို တိုင်ကြားမှု ၈၆ စောင် ရှေ့နေကို တိုင်ကြားမှု ၃၉ စောင်၊ တရားမမှုတွင် အမွေမှု ၂၄ စောင်၊ မြေမှု ၃၆၆ စောင်၊ ရာဇဝတ်မှုတွင် အလွဲသုံးစားလုပ်မှု ၅၁ စောင်၊ လူသတ်မှု ၆ စောင်၊မုဒိမ်းမှု ၉ စောင်၊ အမျိုးသမီးမှု ၈ စောင်၊ ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်မှု ၂၉ စောင်၊လိမ်လည်မှု ၆၄ စောင်၊ လာဘ်ပေး လာဘ်ယူမှု ၄၁ စောင်၊ ဘာသာ ရေးဆိုင်ရာ ၂၉ စောင်၊ အရပ်သား အချင်းချင်း တိုင်ကြားမှု ၁၃၂၅ စောင်၊ ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးကို တိုင်ကြားမှု ၂၁၄ စောင်၊ ရဲတပ်ဖွဲ့ ဆိုင်ရာ ၁၂၆ စောင်၊ဆရာဝန်အား တိုင်ကြားမှု ၁၂ စောင်၊ အထွေထွေ အုပ်ချုပ်ရေး ဝန်ထမ်း တိုင်ကြားမှု၄၆ စောင်၊ စည်ပင် ဝန်ထမ်း ၇၂ စောင်၊ ပညာရေး ဝန်ထမ်း ၇၄ စောင်တို့အားစိစစ်ကာ အရေးယူ ခဲ့ကြောင်း ဝန်ကြီး၏ အဆိုအရ သိရသည်။ ''တိုင်ကြား တင်ပြ ရာမှာ နစ်နာ သူကိုယ်တိုင်က အမည်၊ မှတ်ပုံ တင်အမှတ်၊ လက်မှတ် (သို့မဟုတ်) လက်ဗွေ၊ ဓာတ်ပုံ၊ လိပ်စာအပြည့် အစုံကို ခိုင်ခိုင်မာမာ အထောက်အထားနဲ့ တိုင်ကြား တင်ပြချက်ကိုသာ အရေးယူ ဆောင်ရွက်ပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ မမှန်မကန် တိုင်ကြားစာ ၁၂၆ စောင် လက်ခံ ရရှိခဲ့တဲ့အတွက် အဲဒီသူတွေကို မှတ်တမ်းတင်သတိ ပေးပြီး မနာလိုဝန်တိုမှု၊ လုပ်ကြံမှု၊ အသရေပျက်လိုမှုကြောင့် နောက် နောင်မှာ ထိရောက်စွာအရေးယူ သွားမှာဖြစ်ပါတယ်'' ဟု ဝန်ကြီး က ပြောသည်။ အဆိုပါ တင်ပြစာ (အမှု) များ သည် နိုင်ငံတော် သမ္မတ၏ တာဝန် ပေးချက်အရ သမ္မတရုံးဝန်ကြီးဌာန အနေဖြင့် ၅-၄-၂ဝ၁၁ မှ ၃၁-၁-၂ဝ၁၂ ရက်နေ့အထိ ကာလ အတွင်း တင်ပြလာခြင်းဖြစ်ကြောင်း၊ ယင်းအမှုများ အပါအဝင် ဆက် လက်ဆောင်ရွက် အရေးယူသွား မည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
"ရန်ကုန်ဆိပ်ကမ်းအား ရေယာဉ်ကြီးများ ဆိုက်ကပ်နိုင်ရန် ပြုပြင်ဆောက်လုပ်တော့မည်"
ရန်ကုန် ဆိပ်ကမ်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် တန်ချိန်၃၅ဝဝဝအထိရှိသော ရေယာဉ်ကြီးများဝင်ထွက်သွားလာနိုင်ရန်နှင့် လက်ရှိဆိပ်ခံတံတားများအား အဆိုပါသင်္ဘောကြီးများ ဝင်ရောက် ဆိုက်ကပ်နိုင်ရန် ပြုပြင်ဆောက်လုပ်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ပို့ဆောင်ရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးဥာဏ်ထွန်းအောင်ကပထမအကြိမ် အမျိုးသားလွှတ်တော် တတိယပုံမှန် အစည်းအဝေး ဆဋ္ဌမနေ့တွင် ပြောကြားသည်။
''အခု လောလောဆယ် ရန် ကုန်ဆိပ်ကမ်းကို ဝင်ထွက်နေတဲ့ တန်ချိန်တစ်သောင်းခွဲ ရေယာဉ်ေ တွ အစားတန်ချိန် သုံးသောင်းကနေ သုံးသောင်းခွဲအထိ ရှိတဲ့ ရေယာဉ် ကြီးတွေ ဝင်ထွက် လို့ရအောင် ရည်ရွယ်ထားပါတယ်။ အဲဒီလို ဝင်ထွက်လုိ့ရအောင်နဲ့ ရေလမ်း ကြောင်းမှာ လုံခြုံစိတ်ချရဖို့အတွက် အဲဒီယာဉ်တွေဆိုက်ကပ်နိုင်ဖို့ လက်ရှိဆိပ်ခံတံတားတွေကို ခံနိုင် ဝန်ကောင်းအောင် ပြုပြင်မွမ်းမံသွားဖို့ ရှိပါတယ်'' ဟု ဝန်ကြီးကရန်ကုန် တိုင်းဒေသကြီး၏ မဲဆန္ဒနယ် အမှတ်(၄)မှ ဒေါက်တာမြတ်ဥာဏစိုး ၏ ''ရန်ကုန်ဆိပ်ကမ်း ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး စီမံကိန်းနှင့်ပတ်သက်၍ အကောင်အထည် ဖော်ရာတွင် ထည့်သွင်း စဉ်းစားသင့်သည့် အချက်များကိုပြန်လည်သုံးသပ် ဆောင်ရွက်ရန် အစီအစဉ်ရှိမရှိ''ဟူ သောမေးခွန်းနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ပြောကြားခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ရန်ကုန်ဆိပ်ကမ်းဖွံ့ဖြိုးရေး Conceptual Plan ကို ၂ဝ၁ဝ ပြည့်နှစ်မှ စ၍ ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များနှင့် ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းရေးဆွဲ ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး သီလဝါ အထူးစီး ပွားရေးဇုန်ဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံကိန်းကို ယခု နှစ်မှစတင်ကာ အကောင်အထည် ဖော်ဆောင် ရွက်နေကြောင်း၊ ယင်း သို့ဆောင်ရွက်ရာတွင် အနာဂတ် ကာလ၌သီလဝါ အထူးစီးပွားရေး ဇုန်နှင့် ဆက်စပ်ဆိပ် ကမ်းများ၏ အလားအလာများကိုပါ ထည့်သွင်း စဉ်းစား၍(In Line) ဖြစ်ေ အာင် ပြုလုပ် သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရ သည်။လက်ရှိအနေအ ထားတွင် သီလဝါဆိပ် ကမ်းအပါအဝင် ရန်ကုန်ဆိပ်ကမ်း၌ နိုင်ငံတကာ ရေယာဉ်ကြီးများ ဆိုက်ကပ်နိုင်သည့် International Wharf ၂၃ စင်းရှိ ကာ ကုန်သေတ္တာစခန်း သုံးခု ရှိပြီး နိုင်ငံတကာ ကုန်တင်ရေ ယာဉ်ကြီး များဝင်ရောက်မှုအနေဖြင့် ၂ဝဝ၁-၂ဝဝ၂ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်တွင် ၁၁၇၁ စင်း ရှိရာမှ ၂ဝ၁ဝ-၁၁ ဘဏ္ဍာရေး နှစ် တွင် ၁၇၇၅စင်းအထိ ၅၁ ရာခိုင်နှုန်း ဝင်ရောက်မှု တိုးတက် များပြားလာခဲ့ကြောင်း၊ ကုန်စည် ကိုင်တွယ်မှုအနေဖြင့်(ကုန်သေတ္တာ အပါအဝင်) ၂ဝဝ၁-၂ဝဝ၂ ဘဏ္ဍာ ရေးနှစ်တွင် မက်ထရစ်တန် ၁ဝ ဒသမ ၇၇ သန်းမှ ၂ဝ၁ဝ-၂ဝ၁၁ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်တွင် မက်ထရစ်တန် ၁၇ သန်း (၆ဝ ရာခိုင်နှုန်းခန့်) တိုး တက်ကိုင်တွယ်ခဲ့ရပြီးBerth Occupancy Ratio သည်လည်း ၇ဝ ရာခိုင်နှုန်းသို့ရောက်ရှိနေ ပြီဖြစ် ကြောင်းဝန်ကြီး၏ အဆိုအရ သိရသည်။ထိုကဲ့သို့ ရေယာဉ်ကြီးများ နှင့် ကုန်စည်များ တိုးတက်လာပြီး တံတားများတွင် သင်္ဘောဆိုက်ကပ် မှု အခြေအနေ တိုးတက်လာေ သာ ကြောင့် ရန်ကုန်ဆိပ် ကမ်းအား တိုးချဲ့ရန်ဆောင်ရွက်ရခြင်းဖြစ်ကြောင်း ဝန်ကြီးက ထပ်လောင်းရှင်းပြ သည်။ရန်ကုန် ဆိပ်ကမ်းသည် ပင် လယ်ဝမှ ၃၂ကီလိုမီတာ ခန့် ဝေး ကွာပြီးတစ်နိုင်ငံလုံး၏ ရေကြောင်း ဆိုင်ရာ ကုန်သွယ်မှုအားလုံး၏ ၈ဝ ရာခိုင်နှုန်းကျော်ကိုကိုင်တွယ် ဆောင်ရွက်နေရကြောင်း လက်ရှိ တွင်နိုင်ငံတကာရေယာဉ်(သင်္ဘော) ကြီးများသည်ရန်ကုန်မြစ်ဝရှိရေ အောက် သဲခုံနှစ်ခုဖြစ်သည့်အပြင် စည်းခုံနှင့်သန်လျက်စွန်း အနီးရှိအတွင်း စည်းခုံတို့ကိုရေပြည့် ချိန်တွင် ဖြတ် သန်းနေရပြီးမြစ်၏ ကွေ့ဝိုက်နေ သော အနေအထားကြောင့် အကြီး ဆုံးတန်ချိန် ၁၅ဝဝဝရှိသောရေယာဉ်ကြီးများသည်ရန်ကုန် ဆိပ်ကမ်းသို့ လည်းကောင်း၊ တန်ချိန် ၂ဝဝဝဝ ရှိ သောရေယာဉ်ကြီးများသည်သီလဝါဆိပ်ကမ်းသို့လည်းကောင်း၊ နေ့အချိန်တွင် ဖြတ်သန်းဝင်ထွက်နေရ ကြောင်းသိရသည်။
“အစိုးရ ဝန်ထမ်းများ လစာ သင့်တင့်သော အခြေအနေ တစ်ခုအထိ တိုးမြှင့် ပေးသင့်ဟု လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်အချို့ ပြောကြား”
လာမည့် ၂ဝ၁၂-၁၃ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်တွင် အစိုးရဝန်ထမ်းလစာများကို ရာခိုင်နှုန်းပြည့် မဟုတ်သော်လည်း သင့်တော်မည့် အခြေအနေ တစ်ခုသို့ ရောက်ရှိအောင် ဆောင်ရွက် ပေးသင့်ကြောင်း ပြည်သူ့လွှတ်တော်နှင့် အမျိုးသား လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်တို့၏ ဖြေကြားချက်များအရသိရသည်။ပြည်သူ့လွှတ်တော် ဥက္ကဋ္ဌ တင်သွင်းခဲ့သော ဝန်ထမ်းများ၏ လစာနှုန်းထား တိုးပေးရေး အဆိုကို ဘဏ္ဍာ ရေးနှင့်အခွန်ဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးက
ပြန်လည် ဖြေကြားပြီးသည့်နောက်ပိုင်းတွင်ပေါ်ပြူလာ နယူးစ်က လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ၁၅ ဦးခန့်အား မေးမြန်းခဲ့ရာ ၄င်းတို့က အထက်ပါအတိုင်းပြန်လည်ဖြေ ကြားခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ''ပြည်သူတွေ မျှော်လင့်ထား တဲ့အချိန် ဒီလို ပိတ်ပင် လိုက်တော့ အလုပ် ဖြစ်နိုင်တာ၊ မဖြစ်နိုင်တာအခန်း ကဏ္ဍလေးတွေ ရှာဖွေ ဖော်ဆောင် နိုင်ဖို့လိုပါတယ်။ ရာနှုန်းပြည့်မဟုတ် တောင် စတိလေးတော့ လုပ်ပေး သင့်တယ်။ ဒီနှစ်အတွက် ၁ဝဝရာခိုင် နှုန်းမဟုတ်တောင် ၁ဝ ရာခိုင်နှုန်းတော့ ဖြည့်ဆည်း ပေးပို့ သင့်ပါတယ် ကျွန်တော်တို့လည်းထောက်ခံ ထားခဲ့တာပါ''ဟု
ပြည်သူ့လွှတ် တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးသိန်း ညွန့်က ဆိုသည်။ အဆိုပါ ဝန်ထမ်းလစာများ တိုးပေး နိုင်ရန်အတွက် လက်ရှိတွင် မြန်မာနိုင်ငံ အတွင်းရှိ စက်မှုလုပ်ငန်းများတွင် အကျိုးမဖြစ်ထွန်းသည့် လုပ်ငန်းများ၊ မအောင်မြင်နိုင်သည့် လုပ်ငန်းများကိုရပ်ဆိုင်း၍သော် လည်းကောင်း၊ လျှော့ချ၍သော် လည်းကောင်း တစ်နည်းနည်းဖြင့် အသုံးပြုရမည့် ဘတ်ဂျက်ကို ဝန် ထမ်းများ၏ လစာအတွင်းသို့ထည့်သွင်းပေးသင့်ကြောင်းလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တစ်ဦးကပြောသည်။''အစိုးရ
ဝန်ထမ်းဟာလည်းအရေးပါတဲ့ ပြည်သူတွေပဲ။ ဖူလုံ အောင်လုပ်ပေးသင့်တယ်။ ပြည်သူ့ လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌရဲ့ အဆိုကို ကျွန်တော် အပါအဝင် အားလုံးနီးပါး ထောက်ခံကြတယ်။ အောက်ခြေ ဝန်ထမ်းရဲ့ လိုငွေက ၁၉၅၉-၆ဝ ခုနှစ်နဲ့ တွက်ကြည့်ရင် နှစ်သိန်းဝန်း ကျင်တော့ ဖြစ်သင့်တယ်။ဝန်ထမ်းတွေ အဆင်ပြေဖို့ လိုတယ်။ မဖြစ်နိုင် တဲ့အဆုံး နည်းနည်းတော့ တိုးပေး သင့်ပါတယ်''ဟုပြည်သူ့လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်ဦးရွှေမောင်ကဆိုသည်။ လက်ရှိ အခြေအနေတွင်
ဝန်ထမ်း လစာများသည် ယခင် ကာလ အတိုင်း ထားရှိသွားမည်ဆိုပါက ဝန်ထမ်း များအကြား အဂတိ လိုက် စားခြင်း၊ လာဘ်ပေး လာဘ်ယူခြင်း အစ ရှိသည့် ဆိုးကျိုးများ ထပ်မံကြုံ တွေ့လာဖွယ် ရှိကြောင်း လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် များ၏ အဆိုအရ သိရသည်။
''ဝန်ထမ်း အခြေခံလစာနှင့် သူတို့ မိသားစုကို စားသောက် ကျွေးမွေး သွားရ မယ်ဆိုရင် လောက်မ လောက်ကို အများသူငါ သိနေတာ ပဲ။ မတိုးလို့ မလောက်ရင် ရသလို၊ ဖြစ်သလို ငွေကို ရှာလာကြမယ်။ လာဘ်ပေးလာဘ်ယူဆိုတာ ပြေး မလွဲပါဘူး''ဟု အမျိုးသား လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တစ်ဦးက သူ ၏ အမြင် ကိုပြောသည်။ယခုအခါ အဆိုပါ ဝန်ထမ်းလ စာများ၏ အခြေအနေသည် အမျိုး သားလွှတ်တော်၊ ပြည်သူ့ လွှတ် တော်နှစ်ရပ်စလုံး ပြင်ပတွင် ထပ်မံ ဖြစ်လာ နိုင်သည့် အခြေအနေကို ညှိနှိုင်း ဆွေးနွေး နေကြပြီး တိကျမည့် အဖြေ တစ်ခုကို စောင့်ဆိုင်း နေကြ ကြောင်း သိရသည်။ ''ရှဉ်လည်းလျှောက်သာ ပျား လည်းစွဲသာ ဖြစ်ဖို့တော့လိုပါတယ်။ သမ္မတကြီး ကိုယ်တိုင် ကလည်း ဝန်ထမ်း တွေရဲ့ လစာကို ညှိနှိုင်း လုပ်ဆောင်ပေး သွားဖို့ ပြောထားတာပဲ။ လုပ်ကို လုပ်ပေးရမှာပါ။ ဒါပေမဲ့ အချိန် ကန့်သတ်ချက် တစ်ခုတော့ ရှိဦးမှာပေါ့။ အခြေအနေက ပထမ ဆုံးတင်ပြ။ ပြီးမှညှိနှိုင်း။ ဒါပြီးမှ ဆုံးဖြတ်ချက် ချရမှာပါ။ ဆုံးဖြတ် ချက်ချဖို့တော့ လိုနေသေးတယ်''ဟု အမျိုးသား လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဒေါ်ခင်ဝိုင်းကြည် ကပြောကြားခဲ့သည်။ အဆိုပါ ဝန်ထမ်း လစာကိစ္စများ နှင့်ပတ်သက်၍ မန္တလေးတိုင်း ဒေသကြီးမဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၅)မှ အမျိုး သားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးဇော်မြင့်ဖေက ''နိုင်ငံတော်ရဲ့ အရ အသုံး ဘတ်ဂျက်ကို တိုင်းတာဖို့ လိုပါတယ်။ အသုံးငွေကို
ကြိုးစားပြီး ချွေတာ တဲ့အခါ၊ စိစစ်ပြီးသုံးတဲ့အခါ ဌာန တစ်ခုစီ အလိုက် သာမန်ငွေ ထွက်လာမှာပါ။ ရာခိုင်နှုန်းပြည့်လုပ် ပေးလို့မရရင်တောင် ၅ဝ ရာခိုင်နှုန်း၊ ၃ဝ ရာခိုင်နှုန်းပေါ့။ တော်တော် တန်တန်လစာကို အသုံးပြုလို့ရပါ တယ်။ ဒီထက် လုပ်ပေးနိုင်ရင် ပို ကောင်းပါလိမ့်မယ်''ဟု ဆိုသည်။ လက်ရှိတွင် ပြည်သူ့လွှတ် တော်ဥက္ကဋ္ဌ၏အဆိုကို ကန့်ကွက်သူ မရှိကြောင်း အမျိုးသား လွှတ်တော် နှင့် ပြည်သူ့လွှတ်တော်မှ ကိုယ်စား လှယ်ဦးရေ ၂ဝ ခန့်ကို မေးမြန်း ကြည့်ရာမှ သိရှိရခြင်းဖြစ်သည်။ ဘဏ္ဍာရေးနှင့် အခွန်ဝန်ကြီး ဌာန ပြည်ထောင်စု ဝန်ကြီး၏ ပြော ကြားချက်အရ ၁၉၅၉-၆ဝ ခုနှစ် စပါးဈေးနှုန်းနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက အနိမ့် ဆုံးမြို့ပြဝန်ထမ်းတစ်ဦး သို့မဟုတ် တပ်မတော်သားတစ်ဦး၏
လစာသည် ကျပ် ၈၂ဝဝဝ နှင့် အမြင့်ဆုံးဝန်ထမ်း တစ်ဦး၏လစာမှာ ကျပ် ၁၆ဝဝဝဝဝ အထိ တိုးမြှင့်ပေးရမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ သို့ပါ၍ လစာနှင့်စရိတ် စုစုပေါင်း ကျပ် ၃၃ဝ၉ ဒသမ ၂၈၆ ဘီလီယံ သုံးစွဲရမည်ဖြစ်ပြီး လက်ရှိပေးနေရ သောလစာနှင့် စရိတ်စုစုပေါင်း ကျပ် ၉၁၁ ဒသမ ၃၈၅ ဘီလီယံထက် ကျပ် ၂၃၉၇ ဒသမ ၉ဝ၁ ဘီလီယံ ပိုမိုကုန်ကျမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရ သည်။
''အငြိမ်းစားဝန်ထမ်းများရဲ့ ပင် စင်လစာကို ဝန်ထမ်းလစာ တိုး သလို လိုက်လျောညီထွေတိုးမြှင့် ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက် ပင်စင်လစာ စုစုပေါင်း ကျပ် ၁၉၂၅ ဒသမ ၂၈၂ ဘီလီယံသုံးစွဲရမှာဖြစ်ပြီး လက်ရှိ ပင်စင်လစာ ကျပ် ၃၃၅ ဒသမ ၄၁၅ ဘီလီယံထက် ကျပ် ၁၅၈၉ ဒသမ ၈၆၇ ဘီလီယံပိုမိုကုန်ကျပါ မယ်''ဟု ပြည်ထောင်စု ဝန်ကြီးဦးလှထွန်းက လွှတ်တော်ကိုယ်စား လှယ်များအား ရှင်းလင်း ပြောကြား သွားခဲ့သည်။
ယခုအခါ ၂ဝ၁၂-၁၃ ဘဏ္ဍာ ရေးနှစ်အတွက် ပြည်ထောင်စု၏ ရသုံးမှန်းခြေငွေစာရင်း လိုငွေသည် ကျပ် ၂၅၁၇ ဒသမ ၈၈၈ ဘီလီယံ ဖြစ်နေသောကြောင့် ၁၉၅၉-၆ဝ ခုနှစ်၏ တန်ဖိုးအတိုင်းရရှိရန် လစာ တိုးမြှင့်လိုက်ပါက ဘတ်ဂျက်လိုငွေ မှာ ကျပ် ၆၆၁၂ ဒသမ ၇၂၈ ဘီလီယံ ဖြစ်ပေါ် လာမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ ထို့အပြင် ဝန်ကြီးက ဝန်ထမ်းများ၏ လစာကို ၁ဝဝ ရာခိုင်နှုန်း၊ ၅ဝ ရာခိုင်နှုန်း များဖြင့် တွက်ချက်ရှင်းလင်းသွားကြောင်း သိရသည်။
အနှစ်ချုပ် တွင် ဝန်ကြီးက နိုင်ငံ့ ဝန်ထမ်း များ၏ လစာလုပ်ခများ တိုး မြှင့် ပေးနိုင်ရန် ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုများ ပြီးမြောက် အောင်ဆောင်ရွက်ပြီး ၂ဝ၁၃-၁၄ ခုနှစ် ဘဏ္ဍာရေးနှစ်မှ
သာ တိုးမြှင့်ရေးကို ဆောင်ရွက်သင့် ကြောင်းနှင့် ယခုလာမည့် ၂ဝ၁၂-၁၃ ဘဏ္ဍာရေး နှစ်တွင် ဝေးလံခေါင် သီသောဒေသများ၌ တာဝန်ထမ်း ဆောင်နေသော ဝန်ထမ်းဦးရေ ၃၇၈၁၇ ဦးကိုသာ ငဲ့ညှာထောက် ထားသောအားဖြင့် ဒေသစရိတ်နှုန်း ထားများကို တိုးမြှင့်ပေးနိုင်ရန် ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ပေးသွားမည်ဖြစ် ကြောင်း ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် သို့ တင်ပြသွားခဲ့သည်။
မြန်မာနိုင်ငံရှိဈေးများတွင် ပိဿာချိန်သုံးစနစ်မှ နိုင်ငံတကာသုံး ကီလိုယူနစ်ဖြင့် ပြောင်းသုံးရန် ဆောင်ရွက်မည်
မြန်မာနိုင်ငံရှိ ဈေးများတွင် ပိဿာချိန်သုံးစနစ်မှ နိုင်ငံတကာသုံး (ကီလိုယူနစ်- မက်ထရစ်ယူနစ်စနစ်) သို့ ပြောင်းလဲ သုံးစွဲနိုင်ရန် မြန်မာနိုင်ငံ အင်ဂျင်နီယာအသင်းနှင့် UMFCCI တို့ ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ အဆိုပါ ပြောင်းလဲမှုအတွက် ဝန်ဆောင်မှုများ၊ နည်းပညာများကို မြန်မာနိုင်ငံ အင်ဂျင်နီယာ အသင်းမှ ပါဝင်ဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်ပြီး ကုန်စည်ဒိုင်နှင့် လုပ်ငန်းရှင်များကို ပညာပေးဖြန့်ဝေရန် မြန်မာနိုင်ငံကုန်သည်ကြီးများနှင့် စက်မှုလက်မှု လုပ်ငန်းရှင်ကြီးများအသင်း (UMFCCI) မှ ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ “ကျွန်တော်တို့ မြန်မာနိုင်ငံ အင်ဂျင်နီယာ အသင်းအနေနဲ့ ကီလိုဂရမ် အလေးတွေကို ဒီဇိုင်းရေးဆွဲမယ်။ အင်္ဂလိပ်၊ မြန်မာ နှစ်ဘာသာနဲ့ အလေးရဲ့ Weight ကိုဖော်ပြထားမယ်။ အလေးတွေ ထုတ်ဖို့ တင်ဒါခေါ်မယ်။ အလေးအတုတွေကို စစ်ဆေးအရေးယူဖို့နဲ့ စံချိန်မီတဲ့ အလေးတွေကို နိုင်ငံတကာ အသိအမှတ်ပြု လက်မှတ်ထုတ်ပေးဖို့ ဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်” ဟု မြန်မာနိုင်ငံ အင်ဂျင်နီယာအသင်းမှ ဦးသန်းဝင်းက ပြောသည်။ မက်ထရစ်ယူနစ်စနစ်ကို ပြောင်းလဲသုံးခြင်းအားဖြင့် အလေးချိန်မှန်ကန်ပြီး ကုန်သည်အကြီး၊ အလတ်၊ အငယ်တွေအားလုံး အခွင့်အရေးမျှတစွာ ရရှိမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ “ ဒီစနစ်ကို ပြောင်းသုံးရင် ဈေးကွက်ထဲမှာ အလေးချိန်တွေ ပိုမှန်ကန်လာမယ်။ နောက်ပိုင်းမှာ မက်ထရစ်ယူနစ်က နိုင်ငံတကာ စံညွှန်းဖြစ်လို့ တွက်ချက်ပေးရတာ ပိုလွယ်ကူလာမယ်။ အချို့အခက်အခဲတွေက သုံးစွဲသူတွေက အလေ့အကျင့်မရှိသေးတော့ တစ်ပိဿာကို ဘယ်နှကီလိုဂရမ်ရှိမလဲ စတဲ့ Use to တွေ မဖြစ်တာတွေ ရှိနိုင်တယ်။ နောက်တစ်ခုက အလေးဟောင်းတွေကို ပြန်ပြောင်းဖို့ အလေးအသစ်တွေ ဝယ်ရမယ့်အတွက် ကုန်ကျစရိတ် ရှိလာမှာဖြစ်ပါတယ်” ဟု စံချိန်၊ စံညွှန်းကုမ္ပဏီ ဥက္ကဋ္ဌ ဦးမြင့်ဇော်က ပြောသည်။ စနစ်သစ် သုံးစွဲလိုသူများအတွက် ပိဿာချိန်နှင့် ကီလိုဂရမ် မတ်ထရစ်ယူနစ်တို့ ကွာခြားချက် အညွှန်းများကို ရောင်းချမည့် ဈေးဆိုင်များတွင် ကပ်ထားပေးမည်ဖြစ်ပြီး အလေးပိဿာ အဟောင်းများကို ဝယ်ယူ၍ အသစ်ဖြင့် လဲလှယ်ပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ၂၀၁၂ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီ ၂၁ ရက်နေ့ထုတ် Flower News ဂျာနယ်တွင် ဖော်ပြထားပါသည်။
နိုင်ငံတော် သမ္မတ ဦးသိန်းစိန် အာဆီယံ အတွင်းရေးမှူးချုပ် ဒေါက်တာ ဆူရင်ပစ်ဆူဝမ် ဦးဆောင်သည့် ကိုယ်စားလှယ် အဖွဲ့အား လက်ခံတွေ့ဆုံ
ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော် နိုင်ငံတော် သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်သည် အာဆီယံ အတွင်းရေးမှူးချုပ် ဒေါက်တာ ဆူရင်ပစ်ဆူဝမ် ဦးဆောင်သည့် ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့အား ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀ ရက်နေ့ ညနေ ၃ နာရီတွင် နေပြည်တော်ရှိ နိုင်ငံတော်သမ္မတ အိမ်တော် သံတမန်ဆောင် ဧည့်ခန်းမ၌ လက်ခံတွေ့ဆုံသည်။ ထိုသို့ တွေ့ဆုံရာတွင် နိုင်ငံတော်သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်နှင့် အတူ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးဝဏ္ဏမောင်လွင်၊ ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာနနှင့် ယဉ်ကျေးမှု ဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးကျော်ဆန်း၊ သမ္မတရုံးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးစိုးမောင်၊ အမျိုးသားစီမံကိန်းနှင့် စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု ဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးတင်နိုင်သိန်းနှင့် ဌာနဆိုင်ရာ အကြီးအကဲများ တက်ရောက်ကြသည်။ ထိုသို့ တွေ့ဆုံရာ၌ ပြည်တွင်းနိုင်ငံရေး ဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှုများနှင့် ဒေသတွင်း ဆက်လက်ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ဖွယ်ရာ လုပ်ငန်းစဉ်များအား ခင်မင်ရင်းနှီးစွာ ဆွေးနွေးကြကြောင်း ၂၀၁၂ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီ ၂၁ ရက်နေ့ထုတ် မြဝတီ သတင်းစာတွင် ဖော်ပြထားပါသည်။
အခြေခံပညာဆရာများ၏ အရည်အသွေး ဗဟိုမှ ကြီးကြပ် အဆင့်မြှင့်ပေးမည်
ဗဟို၏ ကြီးကြပ်မှုဖြင့် အခြေခံပညာအဆင့် ဆရာ၊ ဆရာမများ၏ အရည်အသွေးကို အဆင့်မြှင့် ပေးသွားမည်ဟု ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန ဒုတိယဝန်ကြီးက ပြောသည်။ ”အခြေခံပညာ အဆင့်မြှင့် ဖို့ဆိုတာက ဆရာကောင်းမှရမယ်။ ဒီအတွက် အခုလိုဆောင်ရွက်ခြင်းဖြစ်တယ်”ဟု ဒုတိယ ဝန်ကြီးဦးအေးကြူက ပြောသည်။ အခြေခံပညာ အဆင့်ရှိ ဆရာ၊ဆရာမများ၏ လက်ရှိ အခြေအနေအမှန်ကို သိရှိထားသည့်အတွက် ယင်းကဲ့သို့ ဆောင်ရွက်ပေးရခြင်းဖြစ်ပြီး လျင်မြန်စွာ အကောင်အထည် ဖော်ပေးသွား မည်ဟု ဒုတိယဝန်ကြီး က ဆက်လက်ပြောသည်။
ရန်ကုန်မြို့ ပန်းဘဲတန်းမြို့နယ် အတွင်းရှိ အခြေခံပညာ မူလတန်းကျောင်းမှ ဆရာမတစ်ဦးက ”ဆရာမတို့လည်း မြို့နယ်အစည်းအဝေးတွေ တက်တိုင်းမှာ လူကြီးတွေ က ရှေ့မှာ လုပ်ရမယ့် အနေအထားတွေကို ရှင်းပြပါတယ်။ ရှေ့ခရီးမှာ ဆရာ၊ဆရာမတွေ တော်တော်လေး ကြိုးစားသွား ရတော့မယ့် အနေအထားပဲ”ဟု ပြောသည်။ မြန်မာ့ပညာရေး မြင့်မားတိုးတက်ရေး တွင် အဓိက အရေးပါသည့် သင်ကြားရေးပိုင်းဆရာ၊ဆရာမများ၏ အရည်အသွေးမှာ လက်ရှိခေတ်ကာလနှင့် အံဝင်ခွင်ကျ မဖြစ်မှု များရှိနေသေးရာ၊ ယင်းကိစ္စအား အရေးထား ဆောင်ရွက်ပေးမည့် အပေါ် မြန်မာ့ပညာရေးစောင့်ကြည့် နေသူများက ကြိုဆိုလိုက်ကြသည်။ ဒုတိယဝန်ကြီးက ”ဆရာ၊ ဆရာမတွေရဲ့လက်ရှိအရည်အသွေးထက် ပိုမြှင့်ဖို့ ပြည်ပနဲ့လည်း ပူးပေါင်းသွားမှာပဲ။ ဟိုဘက်က လာပို့ချ၊ အဲဒီလို ကနဦး စီစဉ်ထားတယ်။ ပြည် တွင်းမှာလည်း လိုတဲ့သင်တန်းတွေကို ထပ်ပြီးပို့ချပေးမယ်။ ဒါက အရည်အသွေးပိုင်း၊ နောက်တစ်ခုက အဆင့်မြှင့်ပိုင်း၊ လုပ်ခလစာရရှိမှု နည်းပါးမှုကို တိုးမြှင့်ပေးသွားမယ့် အပိုင်း၊ ဒါလည်း အခု အဆင့်နှစ်ဆင့် ကျော်ဖြတ်ပြီးသွားပြီ၊ ဒီလိုဆိုတဲ့အတွက် စည်းကမ်းပိုင်းကို ဗဟိုကနေ ကြီးကြပ်ရတော့မှာပေါ့”ဟု ပြောသည်။
Posted by ရွှေနိုင်ငံ at 03:21 No comments:
ထောင်ကျော်တန် ဆင်း(မ်)ကတ် ပေါ်ထွက်လာရန် ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီ အဆိုတင်သွင်းမည်
Posted by ရွှေနိုင်ငံ at 03:16 No comments:
အကျဉ်းထောင်မှပြန်လည်လွတ်မြောက်လာသည့် ဦးဂမ္ဘီရ သည် ပြစ်မှုဆိုင်ရာဥပဒေများကို ချိုးဖောက်ရုံသာမက နိုင်ငံတော်အဆင့်ရှိ သံဃာအဖွဲ့ အစည်းကိုပါ ထိပါးစော်ကားမှုများကျူးလွန်ခဲ့ ၊ ဘာသာအကျိုး၊ သာသနာအကျိုးနှင့် သာသနာတော်သန့်ရှင်းရေး အလို့ငှာဓမ္မစက်ဖြင့် ဆောင်ရွက်ရန် မဖြစ်နိုင်တော့သည့်အတွက် အာဏာစက်ဖြင့် ဆောင်ရွက်ရမည်ဖြစ်ကြောင်း ယနေ့ထုတ်အစိုးရပိုင် သတင်းစာများတွင်ဖော်ပြထားပါသည်။
ငြိမ်းချမ်းရေးအားရှောင်လွှဲကာ လက်နက်ကိုင်အာဏာယစ်မူးနေကြသော ကချင်လွတ်မြောက်ရေးတပ်ဖွဲ့ ( KIA ) ခေါင်းဆောင်ကြီးများ (ပေးစာ-၉)
ကေအိုင်အေအဖွဲ့၏ တပ်မဟာ(၃)လက်အောက်ခံ တပ်ရင်း(၁၅)နှင့် ဘွန်ဆင်(န်) BumSen စခန်းမှ စတင်ကာ ၂၀၁၁ခုနှစ်၊ ဇွန်လ(၉)ရက်နေ့တွင် မြန်မာအစိုးရတပ်များနှင့် KIA အဖွဲ့များ ကချင်ပြည်နယ်အတွင်း စစ်ပွဲများ စတင်ဖြစ်ပွားခဲ့ကြပါတယ်။ ကချင်ပြည်နယ်အတွင်း ဒေသတည်ငြိမ်အေးချမ်းရေး ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် အတွက် (၁၆-၆-၂၀၁၁) ရက်နေ့တွင် လိုင်ဇာမြို့၌ ပထမဆုံးအကြိမ် ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးမှုများ ပြုလုပ်ခဲ့ကြ ပါတယ်။ ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးမှုများအား တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခြင်း(၃)ကြိမ်၊ စာဖြင့်အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်ပေးပို့ ခြင်း (၂၁) ကြိမ်ကျော် ပြုလုပ်ခဲ့ကြရာ နိုင်ငံတော်အစိုးရအနေဖြင့် KIOအဖွဲ့(ညှိနှိုင်းရေးအဖွဲ့)၏ တောင်းဆိုချက် များအား အတတ်နိုင်ဆုံးလိုက်လျောပေးခဲ့သော်လည်း KIO အဖွဲ့အနေဖြင့် ပြင်ဆင်ချက်များ ထပ်မံပြုလုပ်ခြင်း၊ တစ်ဆင့်ပြီးတစ်ဆင့် ထပ်မံဖြည့်စွက်ပြောင်းလဲ အကြောင်းပြန်စာများပေးပို့ကာ ငြိမ်းချမ်းရေးရယူရန် ရှောင်လွှဲ လာခဲ့ကြပါသည်။
ယခုအချိန်သည် ကချင်လွတ်မြောက်ရေးတပ်ဖွဲ့(KIA)အဖွဲ့အနေဖြင့် နိုင်ငံတော်အစိုးရနှင့်ငြိမ်းချမ်းရေး ဆွေးနွေးမှုများပြုလုပ်ကာ ပြည်နယ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ကောင်းစားရေးအား အစိုးရနှင့်လက်တွဲပြုလုပ်ရန် အကောင်း ဆုံးအချိန်ပင် ဖြစ်ပါသည်။ နိုင်ငံတော်အစိုးရအနေဖြင့် အခြားတိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ငြိမ်းချမ်းရေးကမ်းလှမ်းမှုများပြုလုပ်ကာ ဆွေးနွေးပွဲများဖြင့် အနှစ်(၆၀)ကျော် လက်နက်ကိုင်တော်လှန်ခဲ့သော KNU ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံးနှင့် ပြီးခဲ့သော ဇန်န၀ါရီလ(၁၂)ရက်နေ့တွင်၎င်း ၊ ဇန်န၀ါရီလ(၁၆)ရက်နေ့တွင် ရှမ်းပြည်တပ်မတော်တောင်ပိုင်း(SSA(s)) အဖွဲ့တို့နှင့် သဘောတူလက်မှတ်ရေးထိုးကာ ဇန်န၀ါရီလ(၆)ရက်နေ့ တွင် (CNF) ချင်းအမျိုးသားတပ်ဦးနှင့် သဘောတူလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ပါသည်။
(ALP) ရခိုင်လွတ်မြောက်ရေးပါတီအား ဇန်န၀ါရီလ ၊ (၂၃)ရက်နေ့တွင် အစိုးရဘက်မှ ပြည်ထောင်စု အဆင့်ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးရန် ကမ်းလှမ်းခဲ့ပြီး ရခိုင်လွတ်မြောက်ရေးပါတီဘက်မှလည်း ကြိုဆိုကြောင်းနှင့် မကြာခင်ငြိမ်းချမ်းရေး အကြောင်းပြန်မည်ဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ PNLO(ပအို့ဝ်အမျိုးသားလွတ်မြောက် ရေးအဖွဲ့ချုပ်)သည်လည်း အစိုးရနှင့်ဆွေးနွေးရန် အဖွဲ့ဝင်(၅)ဦးပါဝင်သော ငြိမ်းချမ်းရေးအဖွဲ့ကို ဖွဲ့စည်းထားပြီး ဖြစ်ကြောင်း ဥက္ကဌ ဗိုလ်မှူးကြီး ခွန်ဥက္ကာမှ အတိအလင်းပြောကြားခဲ့ပြီး နိုင်ငံတော်သမ္မတ၏ ကိုယ်စားလှယ် ရထားဝန်ကြီး ဦးအောင်မင်းနှင့် ဖေဖော်ဝါရီလထဲတွင် ဆွေးနွေးနိုင်ရန် ပြင်ဆင်နေပြီဖြစ်ပါသည်။ နိုင်ငံတော် အစိုးရအနေဖြင့် ငြိမ်းချမ်းရေးရယူနိုင်ခြင်းမရှိသေးသည့် တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့(၁၁)ဖွဲ့လုံးနှင့် ထိတွေ့ ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းမှုများပြုလုပ်ခဲ့ပြီး အဖွဲ့(၆)ဖွဲ့နှင့် အခြေခံသဘောတူညီမှုများကို လက်မှတ်ရေးထိုး ဆောင်ရွက်ခဲ့ ပါသည်။
ကျန်အဖွဲ့(၅)ဖွဲ့နှင့်လည်း ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးမှုများပြုလုပ်ကာ သဘောတူလက်မှတ်ရေးထိုးမှုများ ပြုလုပ်နေချိန်တွင် ကျွန်တော်တို့ ကချင်ဒေသခံပြည်သူများအတွက် ကချင်ပြည်နယ်အားကိုယ်စားပြုကာ တိုက်ပွဲ ၀င်နေသည်ဟု ကြွေးကြော်နေသော KIA အဖွဲ့အနေဖြင့် ဒေသခံပြည်သူလူထုများ၏ စီးပွားရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ ပညာရေး၊ ပြည်နယ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု ရပ်စဲဆုတ်ယုတ်နေသည်များအား မသိကျိုးကျွံပြုကာ ငြိမ်းချမ်းရေး ဆွေးနွေးမှုများအား ရှောင်လွဲမှုအကြိမ်ကြိမ် ပြုလုပ်နေခဲ့ပါသည်။ ယခုနောက်ဆုံးအကြိမ် လိုင်ဇာမြို့၌ ဇန်န၀ါရီ (၁၈)ရက်နေ့ နှင့် (၁၉)ရက်နေ့တွင် ဆွေးနွေးပွဲပြုလုပ်ခဲ့သော်လည်း ငြိမ်းချမ်းရေးကို အဆုံးအဖြတ် ပေးနိုင်သော KIA ခေါင်းဆောင်ကြီးများမပါဝင်ဘဲ မြန်မာစစ်တပ်များ၏ ထိုးစစ်ဆင်မှုများအား ခေတ္တရပ်တန့်စေလိုသော ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့်သာ ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးမှုအား ဟန်ပြလုပ်ဆောင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါသည်။
လိုင်ဇာမြို့၌ ဇန်န၀ါရီ(၁၈)ရက်နေ့ နှင့် (၁၉)ရက်နေ့တွင် ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲ ပြုလုပ်နေစဉ်
ပြည်သူ့ထံသို့ပေးပို့သော သ၀ဏ်လွှာ ကြောငြာချက်အမှတ်(၁/၂၀၁၂) (ပေးစာ-၈)
ယနေ့ ဒီမိုကရေစီအသွင် ကူးပြောင်းရေးနှင့် အတိုက်အခံအင်အားစုတို့၏ စိန်ခေါ်မှုများကို ကျွန်တော်တို့မှ အောက်ပါအတိုင်း ရှုမြင်ပါသည်။
ဒီမိုကရေစီအသွင်ကူးပြောင်းရေး တပ်မတော်အစိုးရမှသည် ဒီမိုကရေစီကူးပြောင်းရေးသို့ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး သန်းရွှေမှ အခြေခံဥပေဒေပေါ်ပေါက်ရေး အမျိုးသားညီလာခံတစ်ရပ် ခေါ်ယူကျင်းပကာ လမ်းပြမြေပုံ(၇)ရပ် အကောင်အထည်ဖော်၍ (၂၀၁၀)ရွေးကောက်ပွဲခေါ်ယူကျင်းပပြီးသည့်နောက် ဒီမိုကရေစီအရေး၊ လူ့အခွင့်အရေးများကို အရှိန်အဟုန်မြှင့်ကာ နှစ်ပေါင်း(၆၀)ကျော် သမိုင်းတစ်ခေတ်ကို ကူးပြောင်းစေခဲ့ပါသည်။ သို့သော် အသွင်ကူးပြောင်းရေးမူအရ အတိုက်အခံအင်အားစုအဖြစ် NLD နှင့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တို့သည် (၂၀၁၂)ခုနှစ် ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲတွင် ပါတီထူထောင်ခွင့်လျှောက် ထား၍ လစ်လပ်သော (၄၈)နေရာတွင် ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်ရန် ပါတီစည်းရုံးရေးများ၊ မဲဆွယ်ရေးများတို့ကို လမ်းပေါ်ထွက် နိုင်ငံရေးအသွင်သဏ္ဍာန်ဖြင့် စိန်ခေါ်ပွဲစတင်နေကြောင်း တွေ့ရှိရပါသည်။ အသွင်ကူးပြောင်း ရေးသည် ပြည်သူ့လွှတ်တော်၌ ဥပဒေပြုရေး၊ တရားစီရင်ရေး၊ အုပ်ချုပ်ရေးမဏ္ဍိုင် (၃)ရပ်အပေါ် NLD ၏ လွှတ်တော်အတွင်းဝင်ရောက်ရေးတွင် စိန်ခေါ်မှုများဖြစ်ပေါ်လာနိုင်မည်ဟု သုံးသပ်ရပါသည်။
NLD ပါတီ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် သမ္မတကြီးတို့တွေ့ဆုံခြင်းသည် ပြည်သူများ၏ရင်တွင်း၌ မဖြစ်နိုင်သော အသွင်တစ်ခုအား ဖြစ်ပေါ်လာခဲ့သဖြင့် အထူးအံ့သြတုန်လှုပ်ခဲ့ကြပါသည်။ တွေ့ဆုံဆွေးနွေး ရေးအသွင်တစ်ရပ်အား ဦးသိန်းစိန် အစိုးရလက်ထက် NLD ၏ တောင်းဆိုချက်များအား ဖြည့်ဆည်းပေးခဲ့ သည့်အတွက် နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများ လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်ပေးခဲ့သည်။ နိုင်ငံတကာမှ ပိတ်ဆို့မှုများ ပြန်လည်ရုပ်သိမ်းသွားစေရန် သမ္မတကြီးနှင့် လွှတ်တော်နှစ်ရပ်မှ ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။ သို့သော်လည်း နိုင်ငံကြီးတစ်ချို့မှ စောင့်ကြည့်နေဆဲကာလဖြစ်သဖြင့် နိုင်ငံတော်အစိုးရသစ်နှင့် NLD ပါတီ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တို့ အားပြိုင်မှုကို ပါတီစည်းရုံးရေးခရီးစဉ်၌ စတင်အားပြိုင်မှု ပေါ်ပေါက်လာခဲ့သည့် အတွက် ရင်ကြားစေ့ရေး အဖြေလမ်းကြောင်းစောင့်ကြည့်ရပေမည်။ ပြည်သူလူထုအပေါင်းတို့ ခင်ဗျား-
၂။ NLD ပါတီ ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲဝင်ရေး
(၂၀၁၂)ခုနှစ်တွင် NLD ပါတီအနေဖြင့် တရားဝင် နိုင်ငံရေးပါတီအဖြစ် မှတ်ပုံတင်၍ ကြားဖြတ် ရွေးကောက်ပွဲတွင် ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်ခွင့်ရခြင်းသည် ပြည်သူတို့အတွက် အထူးအံ့သြရပါသည်။ NLD ပါတီ၏ ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲမတိုင်မီ စိန်ခေါ်မှုအရ (၂၀၁၀)ရွေးကောက်ပွဲအား ဘွိုင်းကောက်လုပ်၍ NO ဟု ကြွေးကြော်ခဲ့ပါသည်။ (၂၀၀၈)အခြေခံဥပဒေအားကန့်ကွက်ခြင်း၊ မဲမပေးရေး၊ မဲရုံသို့မသွားရေး စည်းရုံး လှုံ့ဆော်ခဲ့ပါသည်။ NLD ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင်များ CRPP မှလည်း လွှတ်တော်ကိုယ်စားပြု ကိုယ်စားလှယ်များမှာလည်း ရွေးကောက်ပွဲအား ဆန့်ကျင်ခဲ့ကြပါသည်။
၃။ လွှတ်တော်ပြင်ပနှင့် လွှတ်တော်တွင်းအခြေအနေ
NLD ပါတီမှ ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲတွင် လစ်လပ်နေရာ (၄၈)နေရာအားလုံး ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်မည်ဟု ကြွေးကြော်ခဲ့ပြီးနောက် NLD ဗဟိုအဖွဲ့မှ ကိုယ်စားလှယ်အမည်စာရင်း အပြည့်အ၀ မတင်ထားခဲ့ပါ။ ၎င်း အပြည့်အ၀မတင်ထားခဲ့ခြင်းသည် နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများ ပြန်လည်လွှတ်မြောက်လာမည့်နေ့အား စောင့်ဆိုင်း၍ ချန်လှပ်ထားခြင်းဖြစ်သည်။ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများအား နိုင်ငံတော်သမ္မတကြီးမှ လွတ်ငြိမ်း ချမ်းသာခွင့်ပြုပြီးနောက် ထပ်မံတိုးချဲ့၍ အသက်(၄၈)အောက်လူငယ်များ၊ ပညာရှင်များ အစားထိုးရွေးချယ် ကြေငြာခဲ့ပြန်ပါသည်။ (၈၈)မျိုးဆက်ကျောင်းသား မင်းကိုနိုင်နှင့်အဖွဲ့တို့သည် ၎င်းရွေးကောက်ပွဲအား မလိုလားကြပါ။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ သြဇာကြောင့် မပြောသာလက်ခံခဲ့ကြသော်လည်း ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင် ခြင်းမရှိကြပါ။ သို့သော် လွှတ်တော်ပြင်ပ နိုင်ငံရေးဗျူဟာအရ အတိုက်အခံအင်အားစုတစ်ရပ်အဖြစ် ရပ်တည်၍ လွှတ်တော်အတွင်း ၀င်ရောက်သွားသော ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့်တကွ NLD လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်များ၏ လွှတ်တော်သပိတ် (ပါလီမန်သပိတ်) ဆင်နွဲရန် ပြင်ဆင်ကူးပြောင်း ရပ်တည်ခြင်းဟု သုံးသပ်ရပါသည်။
ကမ္ဘာအဆင့်မီ ရေနက်ဆိပ်ကမ်းအတွက် ပြောင်းရွှေ့ရမည့် အစားထိုးအိမ်ရာများ အကောင်အထည်ဖော်
တနသာင်္ရီတိုင်းဒေသကြီး ထားဝယ်ခရိုင် ရေဖြူမြို့နယ် ဘဝါဆိပ်ကမ်းတွင် ကမ္ဘာ့အဆင့်မီ ရေနက်ဆိပ်ကမ်း တည်ဆောက်ရေး စီမံချက်အရ နဘုလည်ဒေသ ထိန်ကြီးကျေးရွာမှ ၄၄၅ အိမ်၊ မယင်းကြီးကျေးရွာမှ ၁၃၆ အိမ်၊ ပရဒတ်ကျေးရွာမှ အိမ် ၃၁၀ ၊ မူးဒူးကျေးရွာမှ ၃၄၃ အိမ်၊ လဲရှောင်ကျေးရွာမှ အိမ် ၆၁၀၊ ဘဝါကျေးရွာမှ ၅၅ အိမ် စုစုပေါင်းအိမ်ပေါင်း ၁၈၉၉ အိမ်တို့ ပြောင်းရွှေ့ပေးရမည်ဖြစ်သည်။ ယင်းသို့ ပြောင်းရွှေ့ပေးရမည့် အိမ်ရာများအတွက် (ဘဝါမြို့သစ်စီမံကိန်း) ရေးဆွဲကာ ဘဝါဆိပ်ကမ်းသို့ ပြောင်းရွှေ့ပေးရမည့် မိသားစုများ မနစ်နာစေရေးအတွက် တစ်ပြေးညီ တိုက်များအခမဲ့ အစားထိုး ဆောက်လုပ်ပေးလျက် မိသားစုများ ပြောင်းရွှေ့စရိတ်ကိုပါ သက်ဆိုင်ရာကုမ္ပဏီမှ ဝန်ဆောင်မှုပေးမည်ဖြစ်သည်။ မြို့သစ်စီမံကိန်း ရေးဆွဲရာတွင် သာသနာ့မြေ၊ ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း၊ စာသင်ကျောင်း၊ စာကြည့်တိုက်၊ ဘိုးဘွားရိပ်သာ၊ အားကစားကွင်း၊ ပန်းခြံ၊ ရုံးများ၊ ဈေး၊ ပျိုးဥယျာဉ်၊ လူမှုစီးပွားဆိုင်ရာ အခြေခံဆောက်အအုံ၊ မူကြိုကျောင်း၊ အရန်မြေ၊ ဆေးရုံ၊ ရဲစခန်း၊ သုသာန်မြေ၊ လမ်းများဖြင့် မြေတိုင်းဧရိယာ (Surveyed Area ) ၇၃၂ ဧကဖြင့် စီမံကိန်းဧရိယာ Project Area) ၅၁၄ ဧက ၁၀၀ ရာခိုင်နှုန်း ချမှတ်ဆောင်ရွက်ပေးသွားမည်ဖြစ်ပြီး ခုတ်လှဲသီးနှံပင်များအတွက် ကာလတန်ကြေးအလိုက် လျော်ကြေးငွေများ ပေးသွားမည်ဟု အီတာလျှံ ထိုင်းကုမ္ပဏီမှ ပြောဆိုထားကြောင်း ၂၀၁၂ ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီ ၁၈ ရက်နေ့ထုတ် မြဝတီ သတင်းစာတွင် ဖော်ပြထားပါသည်။
နှစ်၂၀ ကျော်ကြာ အဆက်အဆံပြတ်တောက်ခဲ့ရပြီးနောက် မြန်မာနိုင်ငံ၌ ကမ္ဘာ့ဘဏ်လုပ်ငန်းများ ပြန်လည်စတင်မည်
၂၅ နှစ်ကြာမျှ အဆက်အဆံ ပြတ်တောက်ခံပြီးနောက် မြန်မာနိုင်ငံ၌ လုပ်ငန်းများ ပြန်လည်စတင်နိုင်ရေးအတွက် လုပ်ဆောင်နေပြီဖြစ်ကြောင်း ကမ္ဘာ့ဘဏ်က ဖေဖော်ဝါရီ ၁၇ ရက်တွင် သတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ ၂၀၁၁ ခုနှစ် နောက်ပိုင်းကာလ အတွင်း မြန်မာနိုင်ငံအရပ်သား အစိုးရအဖွဲ့သစ်၏ ဒီမိုကရေစီဆိုင်ရာ ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများကြောင့် ဥရောပသမဂ္ဂက မြန်မာနိုင်ငံအပေါ်စီးပွားရေးအရ အရေးယူပိတ်ဆို့မှုများဖြေလျှော့ခဲ့ပြီဖြစ်ရာ အာရှဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ်ကဲ့သို့သော နိုင်ငံတကာ ငွေကြေးအဖွဲ့အစည်းများသည် မြန်မာနိုင်ငံ၌ လုပ်ငန်းများ ပြန်လည် လည်ပတ်ရန် စတင်နေကြပြီဖြစ်သည်။ မြန်မာနိုင်ငံ၏ ဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှုများကြောင့် ကမ္ဘာ့ဘဏ်၏ လုပ်ငန်းဆောင်တာများကို မြန်မာနိုင်ငံ၌ ပြန်လည်စတင်ရန် ဆန္ဒရှိကြောင်း ကမ္ဘာ့ဘဏ်၏ အာရှနှင့် ပစိဖိတ်ဆိုင်ရာ ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ ပါမယ်လာကော့စ်က ပြောကြားခဲ့သည်။ ကမ္ဘာ့ဘဏ်သည် ၁၉၈၇ ခုနှစ်မှစ၍ မြန်မာနိုင်ငံ၌ လုပ်ဆောင်လျက်ရှိသော လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုကို ရပ်ဆိုင်းခဲ့သည်။ သို့ရာတွင် အရပ်သားအစိုးရအဖွဲ့ လက်ထက်၌ နိုင်ငံတကာက အံ့အားသင့်ခဲ့ရသည့် ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများ လုပ်ဆောင်ခဲ့သည်နှင့်အညီ ကာလကြာရှည်စွာ အရှိန်သေခဲ့ရသော မြန်မာနိုင်ငံ၏ စီးပွားရေးကဏ္ဍ ပြန်လည်အရှိန်ရလာပြီး မြန်မာနိုင်ငံ၏ သဘာဝသယံဇာတများအား မျက်စိကျနေသည့် ပြည်ပရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများကိုလည်း ဆွဲဆောင်လာနိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်သည်။ ကမ္ဘာ့ဘဏ်သည် မြန်မာနိုင်ငံ၏ ဘဏ္ဍာရေးနှင့် ဘဏ်လုပ်ငန်းကဏ္ဍများနှင့်ပတ်သက်၍ သုံးသပ်လေ့လာမှုများ ပြုလုပ်သွားမည်ဖြစ်ပြီး ယင်းသုံးသပ်ချက်များအား မကြာမီထုတ်ပြန်ရန်ရှိကြောင်း သိရသည်။ ပြီးခဲ့သည့် ဆယ်စုနှစ်များအတွင်း မြန်မာနိုင်ငံသည် ပြည်ပကြွေးမြီအဖြစ် အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁၁ ဒသမ ၀၂ ဘီလီယံ တင်ရှိခဲ့သည်။ ကမ္ဘာတစ်ဝန်း ပဋိပက္ခများနှင့် လုံခြုံရေးဆိုင်ရာများနှင့် ပတ်သက်၍ ရရှိလာခဲ့သော အတွေ့အကြုံများအရ ကမ္ဘာ့ဘဏ်သည် မြန်မာနိုင်ငံ၏ နယ်စပ်ဒေသ တည်ငြိမ်ရေးကို အထောက်အကူပြုနိုင်ရန်နှင့် စီးပွားရေးကဏ္ဍ ဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် နည်းပညာအရ အထောက်အကူပေးမည်ဖြစ်ကြောင်း ၂၀၁၂ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီ ၁၈ ရက်နေ့ထုတ် ကြေးမုံ သတင်းစာတွင် ဖော်ပြထားပါသည်။
ဥရောပ သမဂ္ဂအဖွဲ့္ဂ (EU) က ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော်သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်အပါအ၀င် အစိုးရအဖွဲ့ဝင် ထိပ်တန်းပုဂ္ဂိုလ် ၈၇ ဦးအပေါ် ခရီးသွားလာခွင့်(ပြည်ဝင်ခွင့်ဗီဇာ)ကို ပိတ်ပင်ထားခြင်းအား ရုတ်သိမ်း
ယမန်နေ့က ဥရောပ သမဂ္ဂအဖွဲ့္ဂ (EU) က ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော်သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်အပါအ၀င် အစိုးရအဖွဲ့ဝင် ထိပ်တန်းပုဂ္ဂိုလ် ၈၇ ဦးအပေါ် ခရီးသွားလာခွင့်(ပြည်ဝင်ခွင့်ဗီဇာ)ကို ပိတ်ပင်ထားခြင်းအား ရုတ်သိမ်း လိုက်ကြောင်း သိရှိရပါသည်။ အဆိုပါ ရုတ်သိမ်း ပေးမှုကို EU နိုင်ငံခြားရေးရာ အကြီးအကဲ Catherine Ashton က ယနေ့တွင် ပြောကြားလိုက်ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း ဖြစ်ပေါ်လာသော အပြုသဘောဆောင်သော အပြောင်းအလဲများကို တုန့်ပြန်သော အားဖြင့် ထိုသို့ ရုတ်သိမ်းပေးခြင်း ဖြစ်ကြောင်းနှင့် သူ့အနေဖြင့်လည်း ဧပြီလအတွင်း မြန်မာနိုင်ငံသို့ လာရောက်ရန် စီစဉ်ထားကြောင်း ပြောဆိုခဲ့ပါသည်။
ထိုသို့ အမေရိကန် ၊ ဥရောပ သမဂ္ဂအဖွဲ့္ဂ (EU) အပါအ၀င် အနောက်နိုင်ငံအများစုက မြန်မာနိုင်ငံအပေါ် ဖြေလျော့မှုများ ပြုလုပ်နေသော်လည်း အတိုက်အခံ အချို့ကတော့ အပြုသဘောဆောင်သော ပြောင်းလဲမှုများမ၇ှိသေး ၊ စစ်အစိုးရမှ ဖြစ်ပေါ်လာသော အစိုးရ ဖြစ်ခြင်းကြောင့် အာဏာ၇ှင်ဟောင်းများ ဖြစ်သည် ဟူသော အကြောင်းပြချက်များဖြင့် ပိတ်ဆို့မှုကို ဆက်လက်ထားရှိရန်တောင်းဆိုဆဲဖြစ်ပါတယ် ခင်ဗျာ ။
နိုင်ငံရေးပါတီများ ရေဒီယိုနှင့် ရုပ်မြင်သံကြားအစီအစဉ်များမှဟောပြော တင်ပြခွင့် ကြေငြာချက်
Posted by ရွှေနိုင်ငံ at 18:53 No comments:
နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းများအတွက် လစာ၊လုပ်ခများ တိုးမြှင့်နိုင်ရန် လိုအပ်သည့် ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုများ ပြီးမြောက်အောင် ဆောင်၇ွက်ပြီးနောက် ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်မှသာ တိုးမြှင့်ဆောင်ရွက်သင့်
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဆိုတာ ဂရုစိုက်စရာမဟုတ်ဘူး ခွပ်ဒေါင်းဆိုတာ ကြောက်စရာမဟုတ်ဘူး နိုင်ငံရေးမှာ ဘယ်သူကိုမှမကြောက်ဘူးဆိုတဲ့ရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင်မင်းအုပ်စိုး
15/2/2012 နေ့က ဖိုးစိန်လမ်း Holly Day စားသောက်ဆိုင်ရှေ့တွင် ရုပ်ရှင်နှင့် ဗွီဒီယိုသရုပ်ဆောင် မင်းအုပ်စိုးမှ အရက်သေစာမူးယစ်သောက်စားပီး လမ်းပိတ်စို့မှု ပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ထို့ကြောင့်တာမွေမြို့နယ် ဖိုးစိန်လမ်း Holly Day စားသောက်ဆိုင်ရှေ့လမ်းမတွင် ၁၅မိနစ်ခန့် ယာဉ်ကြောပိတ်ဆိုမှုဖြစ်ပွားခဲ့ ပြီးရုပ်ရှင်နှင့်ဗွီဒီယိုသရုပ်ဆောင် မင်းအုပ်စိုးမှ အရက်သေစာမူးယစ်သောက်စားပီး သစ်ပင်များအား မီးရှို့ခဲ့ သဖြင့် လာရောက်မီးငြိမ်းသတ်ခဲ့သော မီးသတ်တပ်ဖွဲ့ဝင်များအား အော်ဟစ် ဆဲဆိုခြင်း လုံခြုံရေးလုပ်ငန်း လာရောက်လုပ်ဆောင်သော တာမွေမြို့နယ် ရဲတပ်ဖွဲ့စခန်းမှ ရဲကား ၇ခ။ ၁၇၂၄ ယာဉ်အား လက်သီးဖြင့်ထိုးသောကြောင့် ရဲတပ်ဖွဲ့ပိုင်ယာဉ် ပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့သဖြင့် ပ-၇၆/၂၀၁၂ ပုဒ်မ ပပက ၆၁ ဖြင့် လည်းကောင်း ရရ/၂၀၁၂ ပုဒ်မ ၂၉၄/၃၅၃ ဖြင့် ဒုရဲအုပ် အောင်ကျော်ထွန်း တရားလိုပြုလုပ်ပြီး အမှုဖွင့်ထားကြောင်း သိရှိရပါတယ်။၎င်းအနေဖြင့် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်း ရှိ ရဲစခန်းများတွင် အမှုပေါင်း ၁၁မှုကျူးလွန်ထားကြောင်း သိရှိရပါတယ်။
လူတွေပြောနေကျ စကားတစ်ခွန်းရှိပါတယ်။ လူတစ်ယောက်ဟာ မူးလာရင် အမှန်တရားကိုသာ ဖော်ထုပ်ပြသတတ်တယ်။ ရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင် မင်းအုပ်စိုးဟာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဆိုတာ ဂရုစိုက်စရာမဟုတ်ဘူး ခွပ်ဒေါင်းဆိုတာ ကြောက်စရာမဟုတ်ဘူး နိုင်ငံရေးမှာ ဘယ်သူကိုမှမကြောက်ဘူးဟု ပြောဆိုခဲ့ပါသေးတယ်။ ဒေါ်စုကြည်၏ လုပ်ရပ်များအား မကျေနပ်၍ အရင်ရက်ပိုင်းကမှ NLDပါတီဝင်တစ်ဦး နုတ်ထွက်သွားပြီး ယခု ရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင် မင်းအုပ်စိုးမှ ခုလိုပြောကြားခဲ့ရာတွင် ဒေါ်စုကြည်၏ လုပ်ရပ်များသည် ဟန်သာရှိပြီး အနှစ်မရှိကြောင်း၊ ပြည်သူတွေကိုညာနေကြောင်းဖြစ်သည်ဟု သိရပါတယ် တရားဥပဒေမရှိဘူးလို့ ပြောနေတဲ့ ဒေါ်စုကြည်သည် ပြည်သူတွေကို လိမ်ညာနေပါသည်။ ရုပ်ရှင်သရုပ်ဆာင်တစ်ယောက် ဖြစ်သော်လည်း မူးရစ်ယမ်းကား လူတွေကို အနှောင့်အယှက်ပေးသောကြောင့် အမှုဖွင့် အရေးယူလျက်ရှိတယ်လို့ပါ သိရပါတယ်။
နှစ်သိန်းတန် GSM ဖုန်းများ မတ်လပထမပတ်အတွင်း အတိအကျ ချထားပေးမည်
မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းနှင့် ပြည်တွင်းကုမ္ပဏီ (၂၃)ခုမှ ပူးပေါင်း၍ တန်ဖိုးနည်း ဂျီအက်စ်အမ်ဖုန်း သန်း ၄၀ စီမံကိန်းမှ ပထမအရစ်ဖုန်းအလုံးပါ တစ်သန်းခွဲကို မတ်လ ပထမပတ်အတွင်း ချထားပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းမှ သိရသည်။ “မတ်လအတွင်းတော့ ဖြစ်အောင်ချထားပေးမှာပါ။ တန်ဖိုးကတော့ ကျပ်နှစ်သိန်းဖြစ်မှာပါ။ ရန်ကုန်မြို့အတွက် ဖုန်းအလုံးပါ တစ်သိန်းခွဲ သတ်မှတ်ထားပါတယ်။ တစ်နိုင်ငံလုံး အတိုင်းအတာအတွက် တစ်သန်းခွဲလောက် သတ်မှတ်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ” ဟု မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေးမှ တာဝန်ရှိသူတစ်ဦး၏ ပြောပြချက်များအရ သိရသည်။ “တန်ဖိုးနည်း ဖုန်းတွေက နောက်လပထမပတ်အတွင်းမှာ ထွက်မယ်လို့ ကြားထားပါတယ်။ ရက်အတိအကျတော့ ကျွန်တော်တို့ဆိုင်တွေကို ဘာသတင်းမှ ရောက်မလာသေးဘူး။ တန်ဖိုးဘာညာကိုလည်း အတိအကျ မသိရသေးပါဘူး။ အကယ်၍ တန်ဖိုးနည်းဖုန်းထွက်လာရင် ကျွန်တော်တို့ဆိုင်တွေက အရစ်ကျရောင်းပေးမယ့် အစီအစဉ်ကို စီစဉ်ထားပါတယ်။ ဒီတစ်ခေါက်တော့ဘဏ်နဲ့ မချိတ်တော့ဘူး။ အရစ်ကျ ဝယ်ချင်တဲ့သူတွေကို ဆိုင်ကပဲ စီစဉ်ပေးမှာပါ” ဟု ရွှေဂုံတိုင် Mr.Fone ဆိုင်မှ မန်နေဂျာကိုမင်းမင်းက ပြောကြားခဲ့သည်။ “မတ် ၂၇ ရက်လို့ ကြားတယ်။ ဖုန်းတန်ဖိုးကတော့ အမျိုးမျိုးကြားနေတာပဲ။ ငါးထောင်တန်ဖုန်းမရတော့ အခုလာမယ့် တန်ဖိုးနည်းဂျီဖုန်းပဲ စောင့်ရတော့မယ်ပေါ့” ဟု ရွှေဂုံတိုင်တွင် နေထိုင်သူတစ်ဦးက ပြောကြားခဲ့ကြောင်း ၂၀၁၂ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီ ၂၁ ရက်နေ့ထုတ် News Watch Weekly ဂျာနယ်တွင် ဖော်ပြထားပါသည်။
နိုင်ငံရေးပါတီများ ရေဒီယိုနှင့် ရုပ်မြင်သံကြားအစီအစဉ်များမှဟောပြော တင်ပြခွင့်
ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်က နိုင်ငံရေးပါတီများ ရေဒီယိုနှင့် ရုပ်မြင်သံကြားအစီအစဉ်များမှ ဟောပြောတင်ပြခွင့် ကြေညာချက်အမှတ် (၁၂/၂၀၁၂) ကို ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၆ ရက်နေ့ ရက်စွဲဖြင့် ထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်သည်။ အဆိုပါ ကြေညာချက်တွင် လွှတ်တော်အသီးသီးတွင် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် လစ်လပ်နေသည့် မဲဆန္ဒနယ် (၄၈) နယ်၌ ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲများကို ၁.၄.၂၀၁၂ ရက် (တနင်္ဂနွေ)နေ့တွင် ကျင်းပပြုလုပ်မည်ဖြစ်ကြောင်း ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်က ကြေညာချက်အမှတ် (၆၁/၂၀၁၁) ဖြင့် ထုတ်ပြန်ကြေညာထားပြီးဖြစ်ပါသည်။ လစ်လပ်မဲဆန္ဒနယ် အသီးသီးတွင် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများ ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ရန် စာရင်းသွင်းထားသည့် နိုင်ငံရေးပါတီ (၁၇) ပါတီအား ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲအတွက် စည်းရုံးမဲဆွယ်ရန် မိမိတို့ပါတီ၏ မူဝါဒသဘောထား၊ လုပ်ငန်းစဉ် စသည်တို့ကို ရေဒီယိုနှင့် ရုပ်မြင်သံကြား အစီအစဉ်များမှ ဟောပြောတင်ပြခွင့်ပြုမည် ဖြစ်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲတွင် ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ကြမည့် နိုင်ငံရေးပါတီများသည် ရေဒီယိုနှင့် ရုပ်မြင်သံကြားအစီအစဉ်များမှ ဟောပြောတင်ပြလိုလျှင် သက်ဆိုင်ရာ ပါတီဥက္ကဋ္ဌ သို့မဟုတ် အတွင်းရေးမှူးက မိမိတုိ့ပါတီအတွက် အချိန်ဇယားဖြင့် သတ်မှတ်ပေးသည့်ရက်မတိုင်မီ အနည်းဆုံး (၇) ရက် ကြိုတင်၍ ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်သို့ ဟောပြောတင်ပြလိုသည့် စာမူနှင့်အတူ ခွင့်ပြုမိန့် လျှောက်ထားရမည်။ (ခွင့်ပြုမိန့်လျှောက်ထားသည့် စာမူသည် (A4) အရွယ်အစားစက္ကူ (၇) မျက်နှာထက်မပိုစေရပါ။) ရေဒီယိုနှင့် ရုပ်မြင်သံကြားအစီအစဉ်မှ ဟောပြောခွင့်ပြုရန် လျှောက်ထားကြသည့် နိုင်ငံရေးပါတီများအား အဆင်ပြေစွာ အလှည့်ကျ ဟောပြောတင်ပြနိုင်စေရန်အတွက် နိုင်ငံရေးပါတီတစ်ခုချင်းအလိုက် ဟောပြောတင်ပြခွင့် ရရှိသည့် နေ့ရက်နှင့် အချိန်ဇယားကို ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်က သက်ဆိုင်ရာဌာန အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ညှိနှိုင်းသတ်မှတ်ပေးပါမည်။ နိုင်ငံရေးပါတီများသည် ကြေညာချက်ပါ တားမြစ်ချက်တစ်ရပ်ကိုဖြစ်စေ၊ ခွင့်ပြုမိန့်ပါ သတ်မှတ်ချက် သို့မဟုတ် စည်းကမ်းချက်တစ်ရပ်ရပ်ကိုဖြစ်စေ လိုက်နာခြင်းမရှိပါက တည်ဆဲဥပဒေအရ အရေးယူခြင်းခံရမည့်အပြင် နိုင်ငံရေးပါတီများ မှတ်ပုံတင်ခြင်း ဥပဒေအရလည်း အရေးယူခြင်း ခံရမည်ဖြစ်သည်။ သို့ဖြစ်၍ ၁.၄.၂၀၁၂ ရက်နေ့တွင် ကျင်းပမည့် ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲကို လွတ်လပ်၍ တရားမျှတသော ရွေးကောက်ပွဲ ဖြစ်စေရေးအတွက် ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ကြမည့် နိုင်ငံရေးပါတီများသည် စည်းရုံးမဲဆွယ်ရန် ကိစ္စအလို့ငှာ မိမိတို့၏ မူဝါဒ၊ သဘောထား၊ လုပ်ငန်းစဉ် စသည်တို့ကို ရေဒီယိုနှင့် ရုပ်မြင်သံကြား အစီအစဉ်များမှ ဟောပြောတင်ပြမှုများ ပြုလုပ်ကြရာတွင် ဤကြေညာချက်နှင့်အညီ ဆောင်ရွက်ကြရန် ဖြစ်ပါသည်ဟု ၂၀၁၂ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၇ ရက်နေ့ထုတ် မြန်မာ့အလင်း သတင်းစာတွင် ဖော်ပြထားပါသည်။
“နိုင်ငံတော် သမ္မတထံ တင်ပြသည့် စာများထဲမှ မှန်ကန်သေ...
“အစိုးရ ဝန်ထမ်းများ လစာ သင့်တင့်သော အခြေအနေ တစ်ခုအ...
အခြေခံပညာဆရာများ၏ အရည်အသွေး ဗဟိုမှ ကြီးကြပ် အဆင့်ြ...
ပြည်သူ့ထံသို့ပေးပို့သော သ၀ဏ်လွှာ ကြောငြာချက်အမှတ်(...
ကမ္ဘာအဆင့်မီ ရေနက်ဆိပ်ကမ်းအတွက် ပြောင်းရွှေ့ရမည့် အစ...
နှစ်၂၀ ကျော်ကြာ အဆက်အဆံပြတ်တောက်ခဲ့ရပြီးနောက် မြန်...
ဥရောပ သမဂ္ဂအဖွဲ့္ဂ (EU) က ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင...